छोलेको साथ पालक - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
पालक संग Chickpeas
सुरूवात48 मिनेट3 व्यक्ति
द्वारा गोन्जालेज सद्गुण
मैले केहि अन्य अवसरमा तपाईलाई भनेझैँ, मसँग सानो बगैंचा छ जुन हामी तरकारी बगैंचामा परिणत भएका छौं। प्याजको प्वालमा मेरो काका, उसले मलाई रोप्यो पालक र चार्टत्यसोभए जब म तिनीहरूलाई चाहन्छु मैले चक्कु लिनु पर्छ र पातहरू काट्नु पर्छ।
हालसालै म गर्न उत्सुक छु थर्मोमिक्समा परम्परागत व्यंजनहरु र मसँग धेरै पालक रहेको तथ्यको फाइदा उठाउँदै, म इन्टरनेटमा खोजी कसरी गरिरहेको छु भनेर छोपेर। मैले धेरै रेसिपीहरू भेट्टाएँ, मैले उनीहरूलाई दुईवटा ब्लगहरूबाट सन्दर्भको रूपमा लिएको छु; कार्मेनको प्रयोगहरू र नुस्खा पुस्तक र मैले तिनीहरूलाई मेरो रुचि अनुसार अनुकूलित गरेको छु। यो एक सफलता भएको छ, र यो पनि परम्परागत तरिकामा उस्तै बाहिर आउँछ।
दिमागमा राख्नुहोस् कि खाना पकाउने समयहरू म दिन्छु ताजा पालकफ्रिज गरिएकोका लागि,4वा minutes मिनेट जति हटाउनुहोस्।
1 पालक संग Chickpeas
प्राकृतिक अवयवहरूको स्वादको साथ एक उत्तम परम्परागत नुस्खा।
खाना पकाउने समय: 48M
कुल समय: 48M
G०० ग्राम पालक
१ cooked० ग्राम पकाएको छार (मैले थोरै थपें)
पेपरिका १ चम्मच
एक चम्चा जीरा
तेज पात (वैकल्पिक)
१ बुउलोन वा नुन ट्याब्लेट
तेल तताउनुहोस् Minutes मिनेट, Varoma तापमान, गति १।
हामी लसुन र रोटी थप्छौं, हामी प्रोग्राम गर्दछौं १२ मिनेट वारोमा तापमान, गति १।
पपरिका, जीरा र एक गिलास पानी थप्नुहोस्, मिक्स गर्नुहोस् Seconds सेकेन्ड, गति 10.
हामी पालक र नुन थप्दछौं। हामी प्रोग्राम २० मिनेट, तापमान १००, बाँया पालो, चम्चा गति। (यदि पालक स्थिर छ भने, कार्यक्रम १ minutes मिनेट)
छोला र पुनप्रोग्राम थप्नुहोस् २० मिनेट, तापमान १००, बाँया पालो, चम्चा गति।
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सलाद र तरकारीहरू, सजिलो, सामान्य, तरकारीहरू, १ घण्टा भन्दा कम
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » सलाद र तरकारीहरू » पालक संग Chickpeas
CHEESE CANDELA भन्यो
मसँग एउटा प्रश्न छ ... यदि मैले यो नुस्खा जमेको पालु make्गो बनाए भने के मैले उनीहरूलाई अघि पकाउनु पर्छ कि म तिनीहरूलाई थर्मोमिक्समा स्थिर राख्छु ????
CANDELA QUESADA लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि तपाईं तिनीहरूलाई राम्रोसँग डिफ्रोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईंले थोरै पानी थप्नुभएन भने, यो त्यस्तो हुने छैन कि यसले धेरै पानी छोडिदिन्छ, अझै उनीहरूसँग जमेको मैले यो प्रयास गरेको छैन किनकि म अझै बगैंचामा छु।
यो नुस्खा धेरै राम्रो देखिन्छ, के हुन्छ पकाएको छोलाको जारले मलाई धेरै विश्वास गर्दैन, म तिनीहरूलाई भिजेको चाहान्छु। यो थर्मोमिक्सको साथ गर्न के गर्न सक्दछ र कुन तरिकामा?
डिडाकलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते, तपाई मलाई पाउनुहुन्छ, हाहाहा, यो अहिलेसम्म मैले केवल भाँडो छोलाले बनाएको छ, छिटो अंकको लागि। ठीक छ, यो एक स्टू को रूप मा भिजेको छ, र त्यसपछि पालक संग तिनीहरूलाई जोड्नुहोस् कि यो अधिक पकाउँछ र पालक को खाना पकाउने समय मा तपाईं छोला को जोड्नुहोस्…। तपाईं मलाई बताउनुहुन्छ कसरी…।
नुरिया 52२ भन्यो
म समीक्षा गर्दै थिएँ ... र मैले DIDAC को कमेन्ट हेरेँ, सत्य यो हो कि मलाई पनि मैले बनाउने चना मन पर्छ ... त्यसैले म 1 किलो किन्छु। म तिनीहरूलाई अलिकति बाइकार्बोनेटले राती भिजाउँछु ताकि तिनीहरू पाचनका लागि धेरै भारी नहोस्, बिहान म तिनीहरूलाई प्याज, गाजर र अजवाइनको टुक्राको साथ प्रेसर कुकरमा राख्छु र "चस्सस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्" सुरु भएपछि भाँडो बन्द गर्छु। "म लगभग 10 मिनेट गणना गर्छु ... म तिनीहरूलाई बाहिर निकाल्छु, निकास गर्छु र "ट्यापर" मा विभाजन गर्छु र जब तिनीहरू चिसो हुन्छन् म तिनीहरूलाई फ्रिजरमा राख्छु, त्यसैले मसँग सधैं पालक र अन्य व्यञ्जनहरूको लागि चना हुन्छ र तिनीहरू "सक्दैनन्"। । एक अभिवादन…
नुरिया 52२ लाई जवाफ दिनुहोस्
कति राम्रो भेरोनिका !!
हामी खुशी छौं कि तपाईंले तिनीहरूलाई मन पराउनुभयो!
नमस्ते एम। कारमेन,
उनीहरू कसरी फिट भए? निश्चित लागि महान।
हाम्रो व्यंजनहरु मा विश्वास को लागी धन्यवाद। चुम्बनहरू!
स्वादिष्ट, म तपाईंलाई बधाई दिन्छु, तिनीहरू अति उत्तम स्वादको साथ बाहिर आए।
धन्यवाद पेपे !! र हामीलाई लेख्न र हाम्रा व्यंजनहरू तयार गर्नु भएकोमा पनि तपाईंलाई धन्यवाद। शुभकामना!
हामीले तपाईंको नुस्खालाई माया गर्‍यौं, मैले यसमा धेरै पटक दोहोर्याएको छु र त्यसमा मैले 400०० ग्राम चना राखेको छु ताकि यो बाहिर आयो 🙂 धेरै धेरै धन्यबाद।
कति राम्रो टेरेसा! धन्यवाद। सबै भन्दा राम्रो कुरा भनेको तपाईंको आवश्यकताहरू र मात्राहरूमा व्यंजनहरू अनुकूल गर्न सक्षम हुनु हो। अंगालो!
यो पूर्ण रूपमा बाहिर आइसकेको छ ... म कल्पना गर्दछु कि यद्यपि यो नुस्खामा वर्णन गरिएको छैन, हामीले पुतली राख्नु पर्छ, हैन?
सबै कुरा मेरो लागि पनि मैदान हुन सकियो
जब तपाईं गुमाउरो पिल राख्नुहुन्छ, के तपाईंको मतलब एभक्रिम गोली हो?
एउटा प्रश्न ... रोटीको टुक्रा कस्तो खालको हो ... कोमल, भुटेको, मोल्ड? धेरै राम्रो देखिन्छ कि व्यंजनहरु साझा को लागी धेरै धन्यबाद।
लिसालाई जवाफ दिनुहोस्
हाई लिसा, रोटी रोटीको नियमित टुक्रा हो, रोटीको रोटी जुन टोस्ट गरिएको छैन वा केहि पनि छैन। जस्तो तपाई यसलाई बेकरीबाट किन्नुहुन्छ। तपाईं पछिल्लो दिनको रोटीको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ जुन तपाईंले खर्च गर्नुपर्दछ। तिम्रो सन्देशको लागि धन्यवाद!
क्रिस्टिना अल्कुडिया बायाँ भन्यो
रेसिपी एकदम राम्रो छ, मैले तिनीहरूलाई आज बनाएको छु र ती स्वादिष्ट छन्, साझेदारीका लागि धन्यबाद
क्रिस्टिना अल्कुडिया इजक्वेरोलाई जवाफ दिनुहोस्
धन्यबाद क्रिस्टिना, हामी धेरै खुसी छौं कि तपाईंले उनीहरूलाई मन पराउनुभयो !! अंगालो
मैले भर्खरै रेसिपी बनाएँ र यो निकै धनी भयो जबकि पालक अलि कडा बाहिर आउँदछन्। मैले पछाडि छोडेको तीतो स्वादको एक चीज हटाउन दुध वा क्रीम थप्नु पर्छ कि?
नमस्कार मारिया, कस्तो अनौंठो। हुनसक्छ यो ਪਾਲकको बिभिन्न प्रकारको छ ... तिनीहरूलाई अर्को पटक ब्ल्यान्च गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र पानी फाल्नुहोस्। तिनीहरूले बाटोमा तीतोपन छोडिन्छ भने हेर्नुहोस्। हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद! अंगालो
नमस्कार म रेसिपी बनाउन चाहान्छु, तर परम्परागत रूपमा, भुनेको रोटी दूध मार्फत जान्छ र माजाओ डे पानमा सिरकाको छप्पर हुन्छ। के तपाईंले यसलाई पालकसँग मिल्नुभयो? धन्यबाद
मँजो गर्न सकी जस्तो गरी तपाईले सँधै गरिरहनु भएको थियो र म यसलाई पालक र भोलाको साथ जोड्न चाहान्छु!
म समय, अनुपात र सबै कुराको सम्मान गर्थें, र यो पालकको साथ चुना प्यूरी जस्तै देखिन्छ, मलाई माफ गर्नुहोस्, मलाई परिणाम मनपर्दैन।
नमस्ते Pepa, कस्तो अफसोस छ। हुनसक्छ तपाईंले छोलेको ब्रान्ड तपाईंले प्रयोग गर्नुभएको भर्ट्युड्सले प्रयोग गरेको भन्दा नरम थियो। अर्को पटक तपाईले कम मिनेट राख्न वा पुतली प्रयोग गरेर बाँया पट्टि घुमाउन को लागी प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई लेख्न को लागी धन्यबाद र हामी दु: खी छौं कि तपाईले अन्तिम परिणाम मन पराउनु भएन!
कडा उमालेको अण्डाको साथ मांस रोल
बिलबाओ सम्म इल